Ciidanka dowladda oo isaga baxay deegaanka Moqokori iyo Al-shabaab oo la wareegtay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka dowladda oo isaga baxay deegaanka Moqokori iyo Al-shabaab oo la wareegtay
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Moqokori ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay saakay halkaasi isaga baxeen, kadib markii maalintii shalay ay kala wareegeen dagaalyahanada Al-shabaab.
Ciidankaasi isaga baxay deegaanka Moqokori ayaa la sheegayaa inay u ruqaansadeen dhinaca magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan. iyadoona ilaa iyo haatan aan la ogayn sababta rasmiga ah ee ka dambeysa ka bixitaankooda deegaankaas.
Saraakiisha ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya oo warbaahinta Bulshoweyn la hadlay ayaa ka gaabsaday inay faah faahin dheeraad ah ka bixiyaan sababta ka dambeysay ka bixitaanka ciidankooda ee deegaanka Moqokori.
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka Hiiraan ka waday dhaq-dhaqaaq militeri ay deegaanada gobolkaasi uga saarayaan dagaalyahanada Al-shabaab.
Dhinaca kale, dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ayaa la sheegayaa inay haatan la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Moqokori, kadib markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya.
Xaaladda deegaanka Moqokori ayaa la sheegayaa inay saakay tahay mid aad u kacsan, waxaana laga yaabaa in ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay dib usoo laba kacleeyaan islamarkaana ay dagaal rogaal celis kusoo qaadaan halkaas.